Ny asan'ny loko lehibe ataon'i Stötter sy ny lolo | Famoronana an-tserasera
Raha tsy miteny amin'ny fotoana rehetra isika fa izany lolo dia tena vehivavy voaloko ny vatany, ary tsy ho tsapanao izany. Fa toy izao, ny asa famoronana nataon'i Johannes Stötter no afaka manafina tanteraka ny lamba olombelona ampiasainy amin'ny sanganasany.
Io no mahavariana indrindra amin'ny asan'ity mpanao hosodoko loko vatana ity izay afaka misaotra ireo sarin'ireo maodeliny mba hahafahany mandoko na dia zavatra tsy mananaina aza toy ny kiraro, na mampifangaro ireo loko amin'ny vatana amin'ny tontolo iainany. Asa tokony harahina ary hasehonay anao eto ambany.
Miatrika a mpanakanto italiana malaza eran-tany fa ireny body paint ireny dia miasa izay ahafahany manafina ilay modely raisiny ho canvas. Araka ny hitanao amin'ny sary, ny maodely dia efa avela hahita ao ambadik'io lolo io izay tamin'ny voalohany dia tsy nisy olona nilatsaka izay vehivavy tokoa.
Ity asa antsoina hoe «lolo» ity dia natokana ho an'i Linnéa zanany vavy ary mino izy fa io no asany tsara indrindra androany. Ny marina dia sarotra ny mahatakatra fa miatrika loko amin'ny vatantsika isika ary tsy mahafantatra akory izany ary mandeha amin'ny antsipiriany, sarotra ny mahita ny famantarana azy. Izy io dia amin'ny sarin'ny fizotran'ny famoronana sy ny fampandrosoana izay ahitantsika izay rehetra ao aoriana.
Izahay koa mamela anao a horonan-tsary mampiseho ny dingana tsirairay notanterahina Raha te hahalala bebe kokoa ianao momba ny fomba nandokoany ny vatan'ilay maodely sy ny fomba nahitany fa namela azy hamorona an'io «lolo» io ireo saripika ireo. Asa feno loko ary ahalalana an-doko tanteraka ny lolo.
Manoro hevitra anao izahay mba hijanona ity lahatsoratra ity for mahalala asa loko hafa, na dia tsy manakaiky ny kalitaon'ny Stötter aza izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ity lolo ity dia vehivavy miloko vatana